Linux Mint 19.3 beta ikozvino inowanikwa kurodha pasi, mangwana ichave yepamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Zvese zvaimhanya kwazvo. Nezuro, Clement Lefebvre yakabudiswa Tsamba yaDecember pane yekushandisa system yainowedzera. Pamusuwo inopa mashoma ruzivo, asi chimwe chinhu chakakosha chichienderera mberi: mangwana Chipiri ichavhurwa Linux Mint 19.3 BETA. Mumaawa angangoita makumi maviri nemana, kuvhurwa kweyekuedzwa vhezheni kuchave kuri pamutemo asi, senguva dzose, isu tatova nenhau nezve kuvhurwa kusiri pamutemo uko, mumashoko ake, timu yacho yakafara kwazvo.
Chikwata chaLefebvre chinoti mufaro urikunzwa nekuti Linux Mint 19 dzakateedzana dzatove nemakore maviri uye dzakakwenenzverwa kare. Uye zvakare, zvinokwanisika kuti naivowo vane iwo manzwiro nekuti pachave nechimwe chinhu chitsva chavasina kutaura muchinyorwa cheruzivo chakaburitswa nezuro. Chinhu chakanaka ndechekuti, chero munhu anoda kutsvaga ega ega ndeapi nhau avasina kutaura nezvaachave aripo, anogona kuedza: Mifananidzo yeIO yave kuwanikwa.
Linux Mint 19.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweCinnamon uye nezvimwe
Linux Mint 19.3 BETA ichave yepamutemo mangwana
Iwe unogona kunge uchiziva kuti isu tiri kunangana nekisimusi kuburitswa gore rino? Ese matatu edhisheni eLinux Mint 3 akapasa QA uye isu tichazivisa iyo BETA kuburitswa neChipiri! Isu tiri kunyatsofara nezve kuburitswa uku. Iyo 19.x yakateedzana ine makore maviri ekuberekwa uye inonzwa yakanyoroveswa kwazvo. Pane zvinotonhorera maficha muna 19.3 izvo zvatisati tataura nezvazvo pablog parizvino. Iyo software yekusarudzwa yakachinja uye zvitatu zvitsva zvinoshandiswa zviri kupinda. Mifananidzo inyowani nyowani uye inoita 19.3 inzwe kunge nyowani.
Izvi kurodha pasi software pamberi penguva zvakajairika. Kuti udzivise kushamisika, makambani mazhinji anogadzirira zvese zvimwe zuva rimwe pamberi, uye ndicho chinhu chakaitwa neLinux Mint timu zvakare. Ramba uchifunga kuti kuburitswa kwacho hakusati kuri kwemutemo, asi kana tichifunga kuti ndiko kusabuditsa kusingagadzike, ndinofunga hazvidiwe kumirira mangwana kana tichida kuyedza beta yeLinux Mint 19.3 "Tricia". Kana iyi iri nyaya yako, unogona kudhawunirodha iyo Cinnamon, MATE uye XFCE shanduro mu32-bit uye 64-bit kubva Iyi link. Kuvhurwa kwe yakagadzikana vhezheni ichasvika mumazororo eKisimusi. Unogona kumirira here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iwe unogona ikozvino kurodha beta yeLinux Mint 19.3 "Tricia", asi kuvhurwa kuchave kuri pamutemo mangwana
Isu tinoenderera mberi nerunyorwa rwe gumi nemaviri mapurogiramu ekuisa muna Ndira 12. Iye zvino 1 dzinoshandiswa mota